Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal सेतो पुतलीसँग सचेत बनौँ - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, १० असोज : फुर्रफुर्र नाच्दै फूलमा पुतली बसेपछि बालबालिका रमाउँछन् । ‘कति राम्री पुतली’ भन्दै पुतली भएतिर बालबालिका दौडिँदा अभिभावक पनि खुसी हुन्छन् । यद्यपि, सबै पुतली खुसी दिनेखालका हुँदैनन् । चिकित्सकको सुझाव छ, ‘‘सेतो पुतलीसँग सचेत बनौँ ।’’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जीव भट्टराईका अनुसार, मानिसको दृष्टि छिनभरमै नष्ट गर्ने आँखाको खतरनाक रोग हो– सापु । सापु सङ्क्रमण भएपछि आँखामा फुलो परेकोजस्तै बाहिरबाटै टल्केको र नानी पूूरै सेतो देखिन्छ ।
यसले आँखाभित्र पानीले बनेको तहसम्म पुगेर नानी, लेन्स भित्री भाग भिट्रियससम्म सङ्क्रमण गराउँछ । यो रोगका लक्षण देखापरेको ४८ घण्टाभित्रै उपचार नगरे आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गर्दा कुनै पनि जीवाणु, किटाणु नरहेको देखिए त्यो सापु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख डा. कमलबहादुर खड्काले सेतो पुतलीबाट लाग्ने सापु रोगले जनस्वास्थ्यमा समस्या थपेको बताउनुभयो । पोखरा, स्याङ्जा, गुल्मी, लमजुङ, बाग्लुङलगायत पहाडी जिल्लामा यो रोगको समस्या देखिएको छ ।
उपत्यकामा पनि सापुको जोखिम बढेको र यसको जोखिम भदौदेखि मङ्सिरसम्म रहने उहाँले बताउनुभयो । डा. खड्काका अनुसार, सेतो धर्के पुतलीसँग बालबालिका रमाउँछन् ।
पुतलीसँग खेल्ने, रमाउने र मार्ने क्रममा पुतलीका रौँ आँखामा पर्दा यसको सङ्क्रमण जोखिम बढ्छ । बालबालिकामा यो रोग बढी देखिनुका कारण बालबालिकाको पुतलीप्रेम नै रहेको अनुभव उहाँको छ । सेतो पुतली सेतो बत्तीमा घुम्न बढी रमाउँछ । सेतो पुतलीसँगको संसर्गमा आएका ठूला व्यक्तिलाई पनि सापु लाग्छ ।
‘सिजनल हाइपर एक्युट पानुभिआईटिस’ अर्थात् सापु रोग नेपालमा पहिलोपटक २०३२ सालमा पोखराका बालबालिकामा देखिएको थियो । सापु तीव्र गतिमा फैलिएर केही घण्टामै आँखाको भित्री भागसम्म पुग्छ । तत्काल उपचार हुन नसकेमा बिरामीले दृष्टि गुमाउँछ ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो रोग प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालमा देखिने गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सापुको जोखिम बढेकाले सजग रहन सबैमा आह्वान गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ  ।